Heathrow: Dib u bilaabida duulimaadyada muhiimka u ah dhaqaalaha UK
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airport » Heathrow: Dib u bilaabida duulimaadyada muhiimka u ah dhaqaalaha UK
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka UK • Wararka kala duwan
Natiijooyinka Heathrow waxay muujinayaan sida COVID u burburisay waaxda duulista iyo ganacsiga Ingiriiska
Heathrow ayaa duubay a 329 milyan oo khasaara Q1 2021
Dib u bilaabida safarada suuqyada sida Mareykanka waxay muhiim u tahay soo kabashada dhaqaalaha Boqortooyada Ingiriiska
Heathrow waxay hoos u dhigtay saadaasheeda rakaabka sanadka ilaa inta udhaxeysa 13 iyo 36 milyan
Natiijooyinka Heathrow ee la sii daayay ee saddexda bilood ah ayaa dhammaaday 31st Maarso 2021 maanta.
Xiritaanka xuduudaha qaranku waxay kordhisaa qasaaraha COVID ilaa kudhowaad 2.4 XNUMX bilyan - Heathrow ayaa duubay further 329 milyan oo khasaara ah Q1 maadaama kaliya 1.7 milyan oo rakaab ah ay soo mareen garoonka diyaaradaha, hoos udhaca 91% marka la barbardhigo Q1 2019. Tani waxay keenaysaa wadarta qasaaraha tan iyo bilowgii aafada ilaa kudhowaad 2.4 23 bilyan. Qiyaasta xamuulka ayaa sidoo kale hoos u dhacday 2019% sanadka XNUMX, iyadoo hoosta ka xariiqeysa sida duulimaad la’aan ay saameyn ugu yeelan karto ganacsiga Ingiriiska ee adduunka intiisa kale.
Soo kabashada dhaqaalaha xagaaga ee Boqortooyada Midowday waxay kuxirantahay safarka dib ubilaabashada laga bilaabo Maajo 17th - Iyadoo baahida salka ku haysa safarka ay wali tahay mid xoogan, sii socoshada hubaal la'aanta siyaasada dowlada waxay la micno tahay inaan hoos u dhignay saadaasheena rakaabka sanadka ilaa inta u dhaxeysa 13 iyo 36 milyan, marka la barbardhigo 81 milyan sanadka 2019. Maadaama talaalada la soo saaray oo heerarka COVID hoos u dhacaan , Dib u bilaabida safarada suuqyada sida Mareykanka waxay muhiim u tahay soo kabashada dhaqaalaha Boqortooyada Ingiriiska waxaanan diyaar u nahay inaan sare u qaadno howlaheena marka dalabku soo laabto. Awoodda Ciidanka Xuduudaha inay u fidiyaan adeeg la aqbali karo rakaabka imanaya ayaa ah walwalka koowaad ee ku saabsan dib u bilaabista iyo Wasiiradu waxay u baahan doonaan inay hubiyaan in miis kasta laga shaqaaleysiiyo si looga fogaado safafka aan la aqbali karin.
Nabadgelyadu wali waa mudnaantayada koowaad - Heathrow wuxuu diyaar u yahay inuu soo dhoweeyo rakaabka wuxuuna maalgashaday inuu ilaaliyo heerarka adag ee COVID-aaminka ah, isagoo noqday mid kamid ah garoomada diyaaradaha ee ugu horeeya ee UK ka gudbiya Qorshaha Hubinta Amniga COVID ee CAA iyo sidoo kale xaqiijinta Aqoonsiga Caafimaadka Madaarka ee Golaha Madaarada Caalamiga.
Mawqif dhaqaale oo adkeysi leh inkastoo caqabado jiraan - Talaabada maaraynta go, aanku waxay ilaalisay shaqooyinka iyo caafimaadka ganacsiga iyadoo ay soo wajahday hubanti la'aan aan horay loo arag. Waxaan hoos u dhignay lacag gubashada 50% oo ka dhan ah Q1 2020, iyadoo 33% hoos loo dhigay opex iyo 77% oo laga jaray capex. Tallaabada maalgelinta ayaa ku kordhisay dammaanad ahaan 41% illaa £ 4.5bn tan iyo markii uu billowday cudurka safka ah, iyadoo bixinaysa dabool ku filan oo lagu daboolayo dhammaan ballanqaadyada ugu yaraan 15 bilood xitaa iyadoo lagu qiyaaso rakaab hooseeya.
Qorshaha Dowladda UK ee ah in lagu daro qiiqa hawada caalamiga ah ee bartilmaameedka waa la soo dhaweynayaa - Isbedelka Cimilada ayaa wali ah caqabadda ugu weyn ee duulimaadyada muddada fog waxaana diiradda la saarayaa bartilmaameedyada qiiqa ka baxa. Dadka siyaasada dejiya ee UK waa inay hada diirada saaraan sidii loo kobcin lahaa wax soo saarka duulimaadka waara (SAF) ee wadanka UK iyagoo fulinaya waajibaadka SAF ee ah 10% sanadka 2030 iyo ugu yaraan 50% sanadka 2050. Sidoo kale waa inay adeegsadaan hogaamintooda G7 iyo COP26 si ay u ogolaadaan a waajibaadka caalamiga ah ee SAF. Duullimaadyada ugu waaweyn ee Heathrow waxay horeyba uga go'an tahay inay adeegsadaan heer sare oo SAF ah marka la gaaro 2030 marka loo fiiriyo kiiska ugu rajo wanaagsan ee Guddiga Isbedelka Cimilada.